8 ASTAAN oo uu gaar ku yahay musharrax C/Raxaman Faroole, ayna waajib kugu tahay inaad barato! – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
8 ASTAAN oo uu gaar ku yahay musharrax C/Raxaman Faroole, ayna waajib kugu tahay inaad barato!
Cabdiraxmaan Maxamuud Faroole, waa siyaasi Soomaaliyeed oo dhashay sanaddii 1945-tii, waxaa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii dhexe ee marxuum Maxamed Siyaad Barre,kadib bur-burkii, waxa uu u qaxay dalka Australia, kadibna waxaa uu noqoday madaxweynaha maamulka Putland oo markii dambe uu doorasho kaga guulleystay Cabdi Weli Maxamed Cali Gaas oo isna mar soo noqday ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Mudane Faroole waxaa uu ka mid yahay xubnaha aqalka sare ee dalka,sidookalena waa musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Sida uu isaguba sheegay, Faroole waxaa uu leeyahay aqoon ku filan,waxuuna howlaha maamulka kusoo dhex-jiray mudda dhan 32 sano.
Shaki kuma jiro in shacabka Soomaaliyeed ay u kala qeybsan yihiin kooxo diimeed, siyaasadeed iyo kuwoo kale oo leh dano kala geddisan, taas ayaana keeni karta in aad la’isugu khilaafo macanaha uu leeyahay madaxweynaha xiga ee Soomaalia.
Haddaba, shabakaddan siyaasadda ee Baahin.com oo si gooni ah wax uga qorta arrimaha doorashada madaxtinnimada Soomaaliya ayaa maqaalkan ku qaadaa dhiggeysa qofka uu yahay C/ Raxmaan Faroole.
AFEEF:ma taageerto siyaasi gooni ah ee mid waliba ayay wax ka qortaa,qoraalkan looma qaadan karo mid keliya lid ku ah mudane Faroole, ee waa taxane siyaasi waliba wax looga qori doono.
Halkan ka aqriso 8 sifo oo uu leeyahay Cabdiraxmaan Maxamuud Faroole:
1-Waa shakhsi aan la gambanin fikirkiisa siyasadeed, xilligii uu doonana si cad u dhaliila ama u ammaana qofkii ama kooxdii uu doono.
2-Waa Siyaasi si xad-dhaf ah u aaminsan maamulka Puntland, waxuuna ku hadal qabsadaa in dadka reer Puntland ay sabab u ahaayeen abuuridda federalka dalka.
3-Kama gambado inuu goor walba shaki geliyo sax ahaanshiyaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waxuuna aaminsan yahay in Xamar ay tahay magaallo ay deggan yihiin dad gooni ah,isla markaana laga wareejiyo maqaamka ay ku leedahay dalka,walow si weyn loogu diidan yahay arragtidaas.
4- Waxaa uu walaal iyo saaxiib u arkaa dowladaha deriska ah, gaar ahaan Itoobiya ayuu la leeyahay xiriir lgu tilmaamay mid xidideysatay oo hoos u aasmay.
5-Ma jecla Faroole, maqalka maamullada Soomaaliland iyo Galmudug,waxuuna waqti ku bixiyaa sidii loo wiiqi lahaa awooddooda.Tani dhaliil gooni ah kuma ahan isaga, ee waa arragti ay ka mideysan yihiin hoggaamiyaasha maamul goboleedyada oo iyagu isku arka cadow halis ah.
6-Waa qof lagu tilmaami karo geesi, laguna aamini karo jagada ugu sarreysa ee dalka,waxay dad badan u arkaan inuu leeyahay waayo-arragnimo baahsan taasoo keeni karto inuu ka gudbo arragtida maamul goboleed,una weecan karo aaminidda dowllad dhexe oo maamusha dalka oo dhan.
7- Sida ay ogaatay Baahin.com. dad badan oo ku nool konfurta Soomaliya ayaa mucaaradsan hoggaamiyaha todobaatameeyo jirka ah,waayo waxay u arkaan nin kala qeybsanaan hor leh ku hoggaamin kara shacabka,waxaase laga yabaa inuu yahay qof ka baddelan sida ay aamisan yihiin.
8-Dadka reer Putland ayaa ku kala arragti duwan qofka uu yahay Faroole, – tusaale ahaan,gobolka Bari ama degaannada Khaatumo ayaa looga arkaa inuu yahay nin xagal daacin iyo hagar-daamo badan, laakiin meelo ay ka mid tahay Garowe ayaa looga arkaa Geesi aysan iloobi doonin taariikhda.
Akhriste, sidee adiga u arragtaa qofka uu leeyahay Faroole? Hoos ku qor jawaabtada.!
Previous: Goormee ayaa la dhaarin doonna Xildhibaanada Cusub Kalfadhiga ugu horeeyo goormee ayuusa dhici doonna????
Next: Akhriso War-murtiyeed ka soo baxay Shirka Madasha iyo Qodobo xasaasi ah oo ku …